Poland kwupụtara ọnọdụ mberede na ókèala Belarus n'ihi mmụba ndị na -akwaga mba ọzọ
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ na -agbasa ozi Poland » Poland kwupụtara ọnọdụ mberede na ókèala Belarus n'ihi mmụba ndị na -akwaga mba ọzọ
Akụkọ Belarus • Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Crime • Akụkọ Ọchịchị • News • ndị mmadụ • Akụkọ na -agbasa ozi Poland • Ịrụ ọrụ • Safety • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
Onye ọchịchị aka ike nke Belarus Alexander Lukashenko kwupụtara na nchịkwa ya agaghịzi anwa igbochi ndị na -akwaga mba ọzọ ịbanye na EU mgbe ndị otu ya machibidoro Belarus iwu maka ntuli aka onye isi ala 2020, nke Lukashenko mebiri.
Ọnụ ọgụgụ ndị kwabatara n'ụzọ iwu na -akwadoghị na Poland na -arị elu nke ukwuu.
Ekwuputara ọnọdụ mberede na ókèala Poland na Belarus.
Belarus na -enyere aka na ịkwaga mbata na ọpụpụ na Poland na mba EU ndị ọzọ.
Onye isi ala Poland ekwupụtala ọnọdụ mberede na mpaghara abụọ dịdebere Belarus n'ihi mmụba dị ukwuu na ọnụ ụzọ mbata ndị na -akwaga mba ọzọ na -akwadoghị.
Nke a bụ nke mbụ n'ime akụkọ mgbe ọchịchị Kọmunist na-achị obodo ka etinyere ọnọdụ mberede na ókèala ya- Poland ewepụtabeghị ụdịrị usoro a, wee zere ịmanye otu ọbụlagodi n'oge nsogbu siri ike nke ọrịa COVID-19, n'agbanyeghị oku a na-akpọ gọọmentị ime ya.
Ọnọdụ mberede ga -adị irè ma ọ dịkarịa ala ụbọchị 30.
Onye isi ala ahụ kpebiri… iwebata ọnọdụ mberede na mpaghara nke kansụl ndị ozi họpụtara, ”ọnụ na -ekwuchitere Duda, Blazej Spychalski, gwara ndị nta akụkọ na Thursday.
Spychalski kwuru, "Ọnọdụ dị na ókèala Belarus siri ike ma dịkwa egwu." "Taa, anyị, dị ka Poland, na -ahụ maka oke nke anyị, kamakwa maka oke nke European Union, ga -emerịrị ihe iji hụ na nchekwa Poland na European Union."
Na Tuesday, gọọmentị rịọrọ Duda ka ọ tinye ọnọdụ mberede na mpaghara ụfọdụ nke mpaghara ọwụwa anyanwụ Poland Podlaskie na Lubelskie nke dị na Belarus. Iwu a ga-emetụta mkpokọta obodo 183 dị n'akụkụ ókèala ahụ wee mepụta mpaghara dị omimi nke kilomita atọ n'akụkụ ókè ya na Belarus.
Ndị ụlọ omebe iwu nke Poland - Sejm ka ga -anabata ọkwa ahụ. A na -eme ndokwa maka okwu a na Fraịde ma ọ bụ Mọnde, dịka akụkọ mgbasa ozi Poland si kwuo.
Ntugharị a na -abịa n'etiti oke mbata na ọpụpụ na -ezighi ezi nke Poland na ụfọdụ steeti Baltic chere na ọnwa ndị na -adịbeghị anya. Puku kwuru puku ndị kwabatara n'ụzọ iwu na -akwadoghị na ha na -eme njem site na Middle East agafeela ma ọ bụ nwaa ịbanye Belarus agbata obi ha na Latvia, Lithuania na Poland.
Ndị na -ahụ maka oke ala Poland kwuru na Wenezde na Ọgọstụ naanị hụrụ ngụkọta nke nnwale 3,500 nke ndị na -akwaga mba ọzọ si Belarus banye na Poland. Ndị nche gbochiri 2,500 nke ụdị mbọ a.
Ihe omume a kpaliri Warsaw iziga ndị agha ka ha wuo ihe mgbochi eriri ogologo ogologo ogologo nke 2.5 nke e mere iji gbatịa ọtụtụ ókèala ya na Belarus dị kilomita 150 (kilomita 93).
The EU boro Belarus ebubo na mbụ na -etinye aka na 'mwakpo a na -emegide' ma na -anwa 'iji ihe mmadụ eme ihe maka ebumnuche ndọrọ ndọrọ ọchịchị' site na ịkwanye ndị na -akwaga mba ọzọ na oke nke mba ndị otu. Vilnius boro Minsk ebubo na ọ na -efegharị ndị si mba ọzọ na -efe efe wee mechie ha na ókèala dịka ụdị agha.
India na -ekpughe oke uto na ngalaba Drone